About us - History - isiZulu
Umlando omfishane ngamabandla ethu
1.Milne Street congregation
(called St. Michael from 1985)
Ngo 1890 Rev. O Stavem waseNorwegian Mission Society waqala ukusebenza edolobheni elingasemtateni iPort Natal. Wathola indawo yokwakha kuMilne Street wakha isakhiwo esincane lapho kwakungaqala khona ibandla. Amaluthela amaningi akhuphuka ephuma emakhaya ezofuna umsebenzi edolobheni elalikhulayo.
Ngo1906 isakhiwo sokuqala sadilizwa kwasekwakhiwa lendlu ekuyiyo esakhona nanamuhla. Rev. S. Eriksen wayeseqhubeka nomsebenzi. Wayeshade nendodakazi yeconsul Abraham Larssen, owayedabuka eNorway owaqala imabhizinisi amaningi lapha eThekwini, enye lazo okuyi Whaling Station etholakala eBluff.
ngoAgust 25 1915 umfundisi wokuqala womdabu, Rev. Petrus Lamula, wabekwa ukuba aphathe ibandla. Wazibandakanya kakhulu esimeni sabantu besilisa ababehlala ngokumpintsheka emahostela khona ngasemtateni. Wahlanganisa abasebenzi hhayi ngesonto kuophela kepha futhi nokufundisa nokuhlangana phakathi nesonto ntambama. Lomsebenzi wakhula ukusungula iLabour Union Movement endaweni yaseThekwini.
Rev. Lamula wayenesiphiwo esikhulu sokufundisa nokushumayela. Kepha kwamele athathe umhlala phansi emsebenzini wakhe kuMilne Street church wayesengenelwa ngu Rev. B. A. Mpanza ngo1924. Isonto laselibhekene nenselelo entsha yokutheleka kwabantu abaningi edolobheni nokuqala kwemikhukhu efana neCato Manor. Isonto elincane lakhiwa ngothayela kuMoore Road ngo1926. Lelikwaba ibandla elingudade obalulekile weMilne Street.
iDurban Corporation ibambhisene nohulumeni yaqala ukwakha izindlu emaphethelweni edolobha. Baqala eLamontville ngo 1934 naseChesterville ngo 1946. kwashaya u1936 isonto lase Lamontville selakhiwe- futhi nalo lingudade welaku Milne Street. ngo2009 umsebenzi omningi wokwandisa indlu yesonto nokwakha amagumbi amanye amabili wafinyelela emaphethelweni.
Umkhankaso wokuxhumania abantu waqalwa eChesterville. Kwakunenhloso yokwakha indlu yesonto kepha indawo ingatholakali. Ngakho eminyaka eminingi ibandla lalikhonzela kwisakhiwo sathayela, kepha ekugcineni banikwa isicelo sokusuka ababephethe indawo. Emuva kwalokhu kwaqhutshekwa kwakhonzelwa kwindlu yokusebenza iminyakana eminingi. Emuva kwalokhu ibandla lasebenzisa amaklas aseChesterville High school, okuyilapho nanamuhla besakhonzela khona. Ibandla laseChesterville selizelakwazi ukuthola indawo lapho kungakhiwa khona futhi selikwazile ukwakha isakhiwo sokuqala esizoba izitezi ezimbili, okuyilapho bezimisele ikungenza ezinyangeni ezincane ezizayo.
Ngesonto lephasika ngo 1959 kwaqalwa isonto lesingisi esontweni laku Moore Road kwenzelwa imindeni exubile eyayisusiwe emakhaya awo eZululand. Kwaqala kancane, kepha lelodlanzana elalikhona lalinomfutho.
ngama 1960’s abaningi ababexubile “Coloureds” basuselwa eAusterville okuyindawo eyagcina yandisiwe ukuba ibeyiWentworth. Amasonto anikwa indawo yokukhonza kuGoschen Rd. kwakunezinkozo ezahlukene ezingu phansi kophahla olulodwa. Kwabekwa abantu ukuthi babheke ukuthi lesisimo singalungiswa kanjani ukuthi kutholakale indlela eyaphambili lwebandla lamaluthela kulomphakathi. Baqhamuka nesu lokuthi imndeni yamaluthela ingahlanganiswa namanye amabandla ayekhona kulendawo njengmaweseli. Dean P. B. Mhlungu, owabangubhishobhu, walichitha lelisu, wathi uma isonto lamaluthela lizobamba iqhaza eningizimu Africa kwakumele kubeyisonto lazozonke izinhlanga, umsebenzi waqhubeka kanjalo. Ngesikhathi amasonto sekkumele asuke kuGoschen Road, ibandla lamaluthela lakwazi emuva kwesikhashana lihleli esakhiweni seReformed Church, ukuthi lihambe liyekokhonza esontweni Elisha eHappy Valley, Ogle Road ngo 1980.
Leli ibandla elaqalwa lisebenzisa amaklas esikole esiseduzane njengendawo yokukhonza. Emuva komkhankaso owabanomthelela omuhle wokukhuphula isikhwama semali bakazi ukuthenga isakhiwo ebandleni lamakatolike kuSarnia Road, okuyilapho bekhonzela khona manje.
Ibandla lasOthandweni laqalwa ngo 2002 kusukela lapho liyahlangana ekilasini lasesikoleni iNew Forest High School.
iHermannsburg Mission yaqala umsebenzi eCator Manor yakha indlu yesonto encane ngothayela- ekhoneni kwalapho okwakwaziwa ngo Cato Manor noOld Main Rd. ngokuhamba kwesikhathi lesisakhiwo sadilizwa kwakhiwa ngosimende, kepha kwagcina kungumlotha. ngo1960 umasipala wakhetha ukuyiqeda indawo yaseCato Manor yase ilahleka kanjalo indawo yokwakhela isonto. ibandla laseCato Crest lisungulwe kabusha amalunga amadala eSt.Michael’s behlanganela emaklasini. Kusukela ngo2009 kwaqalwa kwasetshenziswa igumbi kwisakhiwo lapho kwakune SPCA khona – manje esesitshenziswa njenge ndawoyokuphepha yabantu abahlala khona eCato Crest, lapho sekuyindawo yezindlu zomxhaso.